May | 2013 | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 30/05/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: တန္ခိုးေတာ္, ထြက္ေျမာက္ရာ.	1 Comment
မောရှေသည် ဘုရားသခင်က ကြီးစွာ အသုံးပြုခဲ့သော ပရောဖတ်ကြီး တစ်ပါးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အသုံးတော်ခံ၊ ဘုရားသခင်၏ တန်ဆာ ပလာအဖြစ် အသုံးတော် ခံခဲ့သည်။ သူသည် နိမိတ် လက္ခဏာ များဖြင့် အသုံးတော် ခံခဲ့သည် သာမက ဘာသာ အသီးသီး (ဂျူး၊ အစ္စလမ်၊ ခရစ်ယာန်) က တန်ဘိုး ထားကာ မြတ်နိုးစွာ ဖတ်ရှုလျက် ဘုရားသခင်၏ လမ်းပြမှုကို ယနေ့တိုင် ခံယူနိုင်ရန် ကျမ်းစာအုပ်များ ကိုလည်း ရေးသားခဲ့သည်။ ဆာလံသီချင်း များကို လည်း ရေးသား ခဲ့သည်။ နိမိတ် လက္ခဏာ အနေဖြင့် အံ့သြစရာများကို အီဂျစ်ဘုရင် (အဲဂုတ္တုမင်း) နှင့် တိုင်းသူ ပြည်သားများကို ပြသ ခဲ့သည်။ အီဂျစ် လူမျိုးများ ထံမှ ဣသရေလ လူများကို လွတ်မြောက်စေခဲ့သည်။ ထိုသို့ လွတ်မြောက် စေရန် နိမိတ် လက္ခဏာများ ပြုလုပ်ရာတွင် အဲဂုတ္တု နတ်ဘုရားများကို နှိပ်ကွပ် ဒဏ်ခတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ထာဝရဘုရားသည် အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားဖြစ်ကြောင်း သက်သေ ထူလိုက်ပါသည်။ တန်ခိုး ကြီးသော ဘုရား၊ မှန်သော ဘုရား ဖြစ်ကြောင်း သက်သေ ထူလိုက် သည်ကို အထင်အရှား မြင်တွေ့ခွင့် ရခဲ့ပါသည်။
ထိုနိမိတ် လက္ခဏာများ အားဖြင့် အီဂျစ်နတ်ဘုရားများနှင့် နတ်ဘုရားမများသည် ထိုနှိင်ငံထဲတွင် ကန့်သတ်မှုများ၊ တားဆီးမှုများ၊ နှိပ်ကွပ်မှုများ ပြုလုပ် ခံခဲ့ရ သည်မှာ အထင်အရှားပင် ဖြစ်သည်။
ကျမ်းစာထဲတွင် နံပါတ် (၁၀) ဂဏန်းသည် စုံလင်၊ ထူးခြားသော ဂဏန်းဖြစ်သည်။ ထိုဂဏန်းသည် အရေအတွက် ပြည်စုံခြင်းကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ထိုနိမိတ်လက္ခဏာ (၁၀) ခု ပြုလုပ်ရခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ပြည့်ဝ စုံလင်စွာ ပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သက်သေထူပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ပညတ်တော် (၁၀) ပါးသည် ဘုရားသခင်၏ ပညတ်အလုံးစုံကို ကိုယ်စားပြုသော ပညတ်တော်များ ဖြစ်လာ ခဲ့ပါသည်။ ထိုပညတ်တော် (၁၀) သည် အခြား ပညတ်တော် များကိုလည်း ကိုယ်စားပြု သကဲ့သို့ ဖြစ်လာပါသည်။
အီဂျစ်ပြည် (အဲဂုတ္တု) တွင် များပြားလှသော နတ်ဘုရားများ၊ နတ်ဘုရားမများကို ကိုးကွယ် ယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က မောရှေ အားဖြင့် ပြုလုပ်သော နိမိတ် လက္ခဏာ (၁၀) ခုသည် အီဂျစ်ပြည်မှ နတ်ဘုရားများ အားလုံးကို ဆုံးမ ပြီးသား၊ ဒဏ်ခတ်ပြီးသား ဖြစ်သွားခဲ့သည်။
နတ်ဘုရားများကို ကိုးကွယ်သော ဖာရောဘုရင်နှင့် တိုင်းသူပြည်သားများကို ဘုရားသခင်က မောရှေကို အသုံးပြုပြီး (၁၀) ကြိမ်တိုင်တိုင် ထိုသူတို့၏ နတ်ဘုရားများကို တစ်ပါးချင်းစီး ချွေနှုတ်ယူကာ သူတို့ထံမှ ထွက်ခွာသွားစေခဲ့သည်။ ထို (၁၀) ကြိမ်စလုံးတွင် အီဂျစ် တိုင်းပြည်မှ လူများအားလုံးကို ဖာရော ဘုရင်၌ မနာခံခြင်း၏ အကျိုးဆက် မည်သို့ဖြစ်သည်ကို ထင်ရှား စေခဲ့သည်။ ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် မာနသဘောကို (၁၀) ကြိမ်တိုင်တိုင် ထင်ရှားစေ ခဲ့သည်။ နိမိတ် လက္ခဏာအားဖြင့် သူ၏ မာနကို ချိုးဖဲ့လိုက်သည်။
ဘေးဒဏ် (၁၀)ခုသည် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးနှင့် ကယ်တင်မှုကို သက်သေခံနေသည်။
ဘုရားသခင်သည် မောရှေနှင့် အာရုန်ကို ဘုရားသခင်၏ စေတမန်များအဖြစ် ဖာရောဘုရင်ထံ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဟေဗြဲလူများကို ဘိုးဘေးတို့၏ ထာဝရ ဘုရားထံ သွား၍ ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်ခွင့် ပြုရန် တောင်ဆို ခဲ့သော်လည်း ဖာရောဘုရင်က “ထိုဘုရားက အဘယ် သူနည်း၊ ထိုဘုရားကို ငါမသိ။ ဣသရေလ အမျိုးသားတို့ကို ငါမလွှတ်” (ထွက် ၅း၂) တွင် တုန့်ပြန်ခဲ့ သည်။
အထက်ပါကဲ့သို့ တုန့်ပြန်ခဲ့သော ဖာရောဘုရင်ကို မကြာမီမှာပင် ထာဝရဘုရားက တစ်ဆင့်ခြင်း သိမြင်လာရန် ဆောင်ရွက် ခဲ့လေ တော့သည်။ သူကိုးကွယ်သော နတ်ဘုရား၊ နတ်ဘုရား များထက် ထိုဘုရားသည် တန်ခိုးကြီး သာလွန်ကြောင်း သိရှိ သွားလေတော့သည်။
ထိုနိမိတ်လက္ခဏာများသည် ဣသရေလ (ဟေဗြဲလူများ)၊ ဖာရော ဘုရင်နှင့်တကွ အီဂျစ် တိုင်းသူပြည်သားများကို ဘုရား သခင်၏ တန်ခိုးတော်ကို ပြသ ကြော်ငြာရုံ သက်သက်သာ မဟုတ်ပါချေ။ ကမ္ဘာ လောကကြီး တစ်ခုလုံးနှင့် နောက်ထပ် မျိုးဆက် အားလုံးကိုပါ တန်ခိုးကြီးမား ကြောင်းသက်သေ ထူလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
အဲဂုတ္တုပြည်တွင် ပြုတော်မူသော နိမိတ်လက္ခဏာနှင့် ကပ်ဘေး ဆိုးကြီးများသည် မည်သည့် ရည်၇ွယ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ကြောင်း ဤဆောင်းပါးတွင် အဓိက ဖေါ်ပြလိုပါသည်။
ပထမ ကပ်ဘေးဆိုးကြီး (ရေကို သွေးဖြစ်စေခြင်း) (ထွက် ၇း၁၉-၂၀)
ဖာရောဘုရင်သည် ရေဆိပ်တွင် ရေလာရောက် ချိုးသော အချိန်တွင် ဖြစ်ပါသည်။ အာရုံသည် မောရှေ၏ ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်နှင့် ဖာရောဘုရင်၏ ရှေ့တွင် တောင်ဝှေးဖြင့် နိုင်းမြစ်ကြီးကို တို့ထိ လိုက်သည့်အခါ နိုင်းမြစ်ကြီးသည် အသွေးရောင် လွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါသည်။ ရေထဲတွင် ရှိသော ရေနေ သတ္တဝါများ သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။
သို့သော် ထိုနိမိတ် လက္ခဏာမျိုးကို ဖာရောဘုရင်၏ အနီးတွင် ခစားနေသော အဲဂုတ္တု နတ်ဝိဇ္ဇာများ ကလည်း လိုက်လံ တုပကာ ဆောင်ရွက် ပြသနိုင် သဖြင့် ဖာရော ဘုရင်က မောရှေနှင့် အာရုံကို မောင်းထုပ်ခဲ့ပါသည်။
သို့သော် ထိုနိမိတ် လက္ခဏာဖြင့် အဲဂုတ္တု နတ်ဘုရား တစ်ပါးကို စီရင်ခဲ့ပါသည်။ အဲဂုတ္တုလူများသည် ထိုကပ် ဘေးကြောင့် သောက်သုံးရန် ရေမရှိသည့် ဒုက္ခ ပြဿနာ ခံစားခဲ့ရသည်။
နိုင်မြစ်ကြီးသည် အဲဂုတ္တုလူများကို အဖက်ဖက်က ကောင်းကျိုးများ ရရှိစေခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေး သော်လည်းကောင်း၊ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး သော် လည်းကောင်း၊ ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ တွင်လည်းကောင်း အရေးပါသော အနေအထားတွင် ရှိနေ ပါသည်။ ထိုနတ်ဘုရားသည် ကျရောက် လာသော ကပ်ဆိုးကြီးကြောင့် အရှက် တကွဲ အကျိုးနည်း ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ထို နိုင်းမြစ်ကြီးနှင့် ပတ်သတ်သော နတ်ဘုရားများ ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့အနက် ထင်ရှားသော နတ်ဘုရားများမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်သည်။
ပထမဦးစွာ Hapi နတ်ဘုရား ဖြစ်သည်။ ထိုနတ်ဘုရားကို နိုင်းမြစ်ကြီး၏ ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည် ကာ ကိုးကွယ်မှု ပြုကြသည်။ ထိုနတ်သည် အဲဂုတ္တု တိုင်းပြည်တွင် အကြီးမားဆုံး လှုပ်ရှားသော နတ်ဘုရားဖြစ်သည်။
နောက်ထပ် နတ်ဘုရားတစ်ပါးမှာ Khnum ဖြစ်သည်။ ထိုနတ်ဘုရားသည် နိုင်းမြစ် ကြီးကို စောင့်ရှောက်သော နတ်ဘုရား အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ကိုးကွယ် ကြပါသည်။ ထိုဘုရားသည် လူဦးခေါင်းနှင့် သိုးထီး ဦးခေါင်းရှိသော ရုပ်တု အဖြစ် သတ်မှတ် ထုလုပ် ထား ကြသည်။
အဓိ နတ်ဘုရားမှာ Orisis ဖြစ်သည်။ ထိုနတ် ဘုရားသည် မြေအောက်ကမ္ဘာ၏ နတ်ဘုရား တစ်ပါးဖြစ်သည်။ သေခြင်းကို စိုးပိုင်သော နတ် ဘုရား လည်း ဖြစ်သည်။ ထိုဘုရားသည် ကမ္ဘာ ကြီး၏ အောက်တွင် ရှိပြီး နိုင်မြစ်သည် ထို ဘု၇ား၏ အသွေးဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ် ထား ကြသည်။
ထို့အပြင် နိုင်းမြစ်နှင့် ပတ်သတ်သော နတ် ဘုရားများမှာ Nu နှင့် Tauret တို့ဖြစ်ကြ သည်။
ဒုတိယ ကပ်ဘေး (ဖားများဖြင့် ဒဏ်ခတ်ခြင်း) (ထွက် ၈း၁-၁၅)
ဒုတိယမြောက် နိမိတ်လက္ခဏာမှာ အာရုန်၏ တောင်ဝှေးကို ဆန်ု့လိုက်သော အခါ ဖားများသည် တိုင်းပြည် တစ်ခုလုံးသို့ နေရာ အနှံ့အပြားတွင် တတ်ရောက်လာ ခဲ့သည်။ ထိုဖားများသည် အဲဂုတ္တု လူမျိုးတို့၏ အိပ်ရာများ၊ စားစရာများ၊ အဝတ်အစားများ၊ အသုံး အဆောင်များ စသည်တို့တွင် တက်ရောက် လာသောကြောင့် တိုင်းပြည် တစ်ခုလုံး တုန်လှုပ် ချောက်ခြားခဲ့ရသည်။ ဖားများနှင့် လွတ်သော နေရာမရှိပေ။ ဖာရောဘုရင်၏ ရေချိုးခန်း နှင့် အိပ်ရာ ထက်ထိ ဝင်ရောက် လာခဲ့ပြီး နေရာအနှံ ရှိနေသောကြောင့် အဲဂုတ္တု လူမျိုးများ စိတ်အနှောင့် အယှက် ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
အဲဂုတ္တု နတ်ဝိဇ္ဇာ တို့သည် မောရှေနှင့် အာရုန် ကဲ့သို့ ပြုလုပ်ကာ ဖားများကို ဣသရေလ တိုင်းပြည်တွင် ဆောင်ယူ ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ထိုဖားများကို ဖယ်ရှင်းခြင်းငှါ မစွမ်းဆောင် နိုင်ကြချေ။ ထို့ကြောင့် ထိုဖားများကို ဖယ်ရှင်းရန် အတွက် မောရှေနှင့် အာရုန် ကို ခေါ်ဖိတ်ကာ ထိုဖား များကို ရှင်းလင်းစေ ခဲ့သည်။
ထိုသို့ ပြုလုပ်ရခြင်းသည် အဲဂုတ္တုနတ်ဘုရားမကို ဒဏ်ခတ်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ထိုနတ်ဘု၇ားမမှာ Heket ဆိုသော နတ်ဘုရားမ ဖြစ်သည်။
အဲဂုတ္တု လူမျိုးများသည် ဖားဦးခေါင်းနှင့် မိန်းမကိုယ်လုံး ပုံရှိသော နတ်ဘုရား ရုပ်တုကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ထိုနတ်ဘုရားမ နှင့် ပတ်သတ်ပြီး အဲဂုတ္တု လူမျိုးတို့၏ အယူအဆမှာ ကမ္ဘာကြီးကို ဖန် ဆင်းသော နတ်ဘုရား၏ ဇနီးမယားအဖြစ် ယူဆထားကြသည်။
တတိယ ကပ်ဘေး (ခြင်များဖြင့် ဒဏ်ခတ်ခြင်း) (ထွက် ၈း၁၆-၂၁)
ဖာရော ဘုရင်သည် နိမိတ် လက္ခဏာ များကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော် ကို အသိအမှတ် မပြုလဲ ငြင်းဆန် ခဲ့သည်။ ဣသရေလ လူများကို လွှတ်ပေးရန် အခွင့် မပေးဘဲ ခေါင်းမာမြဲ ခေါင်းမာ လျက် ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က တတိယ ကပ်ဘေးကြီး ပို့လွှတ်ကာ နိမိတ် လက္ခဏာကို ထပ်မံ ပြသခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား ထပ်မံ၍ အာရုန်အား တောင်ဝှေးကို ကိုင်ပြီး မြေမှုန့်များကို ရိုက်နှက်ရန် မှာကြား လေသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ် လိုက်သည့် အခါ အဲဂုတ္တုပြည် တစ်ပြည်လုံတွင် ခြင်ကောင်များဖြင့် ပြည့်နှက်လေတော့သည်။ ထိုခြင်များသည် အဲဂုတ္တုလူများသာမက တိရစ္ဆာန် များပါ ဒုက္ခ ခံစားရလေသည်။ ထိုကဲ့သို့ နိမိတ် လက္ခဏာမျိုး နတ်ဝိဇ္ဇာတို့ လိုက်လံတုပ လုပ်ဆောင် ကြသော်လည်း မစွမ်းနိုင် ကြတော့ချေ။
နောက်ဆုံးတွင် ဖာရောဘုရင်၏ နတ်ဝိဇ္ဇာများမှာ အရှက်ကွဲသွားလေတော့သည်။ ဘုရားသခင်သည် တန်ခိုးအရာတွင် အလွန်ကြီးမားကြောင်း ယခုအခါ ဝန်ခံရလေတော့သည် (ထွက် ၈း၁၉)။ အာရုန်သည် ဤနိမိတ်လက္ခဏာ လုပ်ဆောင်ပြီး နောက် ထပ်မံပြီး နိမိတ်လက္ခဏာများ ပြုလုပ်သောအခါ မပါဝင်တော့ချေ။
ဤနတ်ဘုရားကို Geb ဟုခေါ်ပြီး မြေနတ်ဘုရား (Earth of god) ဟု သတ်မှတ်ထား ပါသည်။ အာရုန်သည် မြေကို ရိုက်နှက်လိုက်သောအခါ ထိုမြေသည် ခြင်ကောင်များ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုနတ်ဘုရားကို ပူဇော်ပသနေသော အဲဂုတ္တုလူတို့ထံ ပြန်လာကာ အဲဂုတ္တုလူ တို့ကို ဒုက္ခပေးခြင်းဖြင့် အဲဂုတ္တုလူတို့ကို စိတ်ပျက်စေသည်။ လုံးဝပူဇော်ပသမှု မပြုချင် လောက် အောင် ဖြစ်သွားသည်။ ထိုမြေနတ်ဘုရားသည် ထာဝရ ဘုရားသခင်၏ လက်ထဲတွင် ရှိနေကြောင်း သက်သေထူခဲ့သည်။
စတုတ္ထမြောက် ကပ်ဘေးဒဏ် (ယင်ရဲများဖြင့် ဒဏ်ခတ်ခြင်း) (ထွက် ၈း၂၀-၃၂)
ဤကပ်ဘေးကို ကျရောက်သည့်အခါ အဲဂုတ္တုလူများနှင့် ဣသရေ လလူများကို ခြားနားမှု ပြုလုပ်ကာ ဒဏ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်ရဲတို့သည် အလွန်ကြမ်း တမ်းသောကြောင့် “အဂုတ္တုပြည် ပျက်လေ၏” (ထွက် ၈း၂၄) ဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ဒီတစ်ကြိမ်တွင် ဖာရောဘုရင် ကိုယ်တိုင် ထာဝရဘုရား၏ တန်ခိုးတော်ကို အသိအမှတ် ပြုခဲ့ပါ သည်။ ထို့ကြောင့် မောရှေကို ခေါ်ယူကာ အပေးအယူ လုပ်ကာ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရသော အဆင့် သို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။ ထိုယင်ရဲများကို ဖယ်ရှားပေးရန် ကိုယ်တိုင် တောင်းဆို လေတော့ သည်။ ထို့ပြင် ဣသရေလ လူများကို သွားခွင့် ပြုပါမည်ဟု ပြောရသည်။ သို့သော် “ဝေးဝေး မသွားပါနှင့်” ဟု ကန့်သတ်ထားလေသည်။
ဤတစ်ကြိမ်တွင် Khepri ဟူသော အင်ဆက် နတ်ဘုရားကို ဒဏ်ခတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုံတွင် ဖော်ပြပုံမှာ သိပ်ပြီး မရှင်းလင်းလှချေ။ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိသည်မှာ ယင်ကောင်း ဦးခေါင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ယင်ကောင် ဖြစ်သော်လည်း အလွန်ကြီးသော အကောင်မျိုးဖြစ်သည်။ နွား များကို ကိုက်သောအခါ နာကျင်ပုံရသည်ဟု ကြားဘူးပါသည်။ လူကိုဆိုလျှင် အဘယ် ဆိုဘွယ်ရာ ရှိလိမ့်မည်နည်း။ ထို သတ္တဝါ ယင်ကောင်သည် ဘယ်သောအခါမျှ တင်းတိမ်ခြင်း မရှိဟု သိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုယင်ရဲများဖြင့် အဲဂုတ္တု လူတို့ အလွန် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါသည်။ Khepri နတ်ဘုရားကို “ယင်ကောင် များတို့၏အရှင်” (lord of flies) ဟု ခေါ်ကြပါသည်။ ထိုနတ်ဘုရားသည် ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သော နတ်ဘုရားအဖြစ် သိမှတ်ခံယူကြပါသည်။ ယခင်က နေနတ်ဘုရား ဖြစ်ပြီး ပြန်လည် မွေးဖွားမှုခံယူကာ ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် ဆိုင်သော နတ်ဘုရားဖြစ်လာသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ထိုနတ်ဘုရား သည်လည်း ဘုရားသခင်၏ ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို ခံစားရကာ လူတို့၏ စိတ်တွင် ကိုးကွယ်လိုစိတ် ပျောက်ဆုံး သွားခဲ့ပါသည်။
ပဉ္စမမြောက် ကပ်ဘေးဒဏ် (တိရစ္ဆာန်များကို ဒဏ်ခတ်ခြင်း) (ထွက် ၉း၁-၇)
ဟေဗြဲလူတို့ကို မလွှတ်သေးဟု ဆိုပါက မနက်ဖြန်နေ့တွင် တိရစ္ဆာန်များကို အနာရောဂါ ဘေးဒဏ်ဖြင့် ဒဏ်ခတ်မည် ဖြစ်ကြောင့် ဖာရောမင်းထံ ကြိုတင် အကြောင်းကြား စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ မနက်ဖြန်နေ့ရောက်သောအခါ အမှန်တကယ် ပြောသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဟေဗြဲလူတို့၏ တိရစ္ဆာန် များသည် တစ်ကောင်မျှ မသေသော်ဘဲ အဲဂုတ္တုလူတို့ ၏တိရစ္ဆာန်များသာ သေဆုံးကြောင်း သိရသောအခါ ပိုမို၍ စိတ်နှလုံး ခိုင်မာခဲ့သည်ဟု သမ္မာ ကျမ်းစာ က ဖော်ပြထား ပါသည်။ (ထွက် ၉း၇)
ဤနိမိတ်လက္ခဏာမှာ အီဂျစ်လူမျိုးတို့၏ နတ်ဘုရား တစ်ပါးဖြစ်သော Hathor နတ်ဘုရားမကို ဒဏ်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနတ်ဘုရားမသည် ကျွဲနွားတို့၏ ဦးခေါင်းနှင့် မိန်းမကိုယ်ခန္ဓာ ရှိပါသည်။ ထိုနတ်ဘုရားမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်သော်လည်း ကောင်း၊ ကွယ်ကာမှုသော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်ပေးသော နတ်ဘုရားမ ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြပါသည်။
ဤနိမိတ်လက္ခဏာကြောင့် အဲဂုတ္တုတိုင်းပြည်တွင် အလွန်ပင် အထိနာခဲ့ပါသည်။ ထိုကျွဲ၊ နွား၊ မြင်း စသည်တို့နှင့် အခြား တိရစ္ဆာန်များသည် စီးပွားရေး၊ စစ်တပ်တွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် စားရိက္ခာ၊ စိုက်ပျိုးရေးတို့ အပြင် အခြား ဆက်စပ်လုပ် ငန်းများအားလုံး ထိခိုက်နစ်နာခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အဲဂုတ္တုလူတို့၏ နတ်ဘုရားတစ်ပါးကို ထာဝရဘုရားက နှိပ်ကွပ် လိုက်ခြင်းသည် မှန်သော ဘုရားကို သိကျွမ်းလာစေရန်သာဖြစ်တော့သည်။
ဆဌမမြောက် ကပ်ဘေး (အနာဆိုးများဖြင့် ဒဏ်ခတ်ခြင်း) (ထွက် ၉း၈-၁၂)
ဤတစ်ကြိမ်တွင် ဘုရားသခင်သည် ကြိုတင် အကြောင်းကြား ပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲနှင့် ဤနိမိတ် လက္ခဏာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤတွင် မောရှေသည် မီးဖိုမှ ပြာကိုယူပြီး ကောင်းကင်တွင် ပစ်လိုက်ရာ အဲဂုတ္တုပြည် တစ်လျှောက်လုံးသို့ ထိုပြာသည် ရောက်ရှိသွားပြီး လူတိုင်းကို အနာဆိုးများ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ လူများသာမက တိရစ္ဆာန်များတွင်လည်း ထိုအနာဆိုးများက နှိပ်စက် လေတော့သည်။ ဖာရောဘုရင်၏ ဘေးတွင် အမြဲ ရှိနေခဲ့သော နတ်ဝိဇ္ဇာ များပင်လျှင် ဒဏ်မခံ နိုင်ကြ။
ဘုရားသခင်သည် သူ၏ လူမျိုးတော်ဖြစ်သော ဟေဗြဲလူတို့ကိုမူကား ထိုအနာဆိုး ရောဂါများ၏ ဘေးဒဏ်မှ ကင်းလွတ်စေရန် ကွယ်ကာမှု ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။ (ထွက် ၉း၁၁)
အဲဂုတ္တုလူမျိုးများသည် သန့်ရှင်းမှုကို ဦးစားပေးကြသည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အမြဲတမ်း သန့်ရှင်းမှု ရှိသည်ဟု တွေး ထင်ကြ သည်။ ယခင်က ရောဂါ ဖြစ်လျှင် မသန့်ရှင်း သောကြောင့် ဖြစ်ရသည်ဟု တွေးထင်လေ့ ရှိသော်သည်။ ဤရောဂါ ကပ်ဆိုး အားဖြင့် အဲဂုတ္တုလူများ အားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တော်တွင် မည်သူမျှ မသန့် ရှင်းကြောင်း ဘုရားသခင်က သက်သေ ထူလိုက်သည်။
Isis နတ်ဘုရားမသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဆေးဝါးများကို စောင့်ရှောက်သူ၊ ဆေးဝါးများ၏ အစွမ်းကို ထိန်းချုပ်သူ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အသက်ကို ပေးသော အရှင် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ သိမှတ် ယုံကြည် ကြသည်။ ဤနိမိတ်လက္ခဏာ ကပ်ဆိုးကြီး ကြောင့် ထိုနတ် ဘုရားမ သည်လည်း အစွမ်းတန်ခိုး မရှိကြောင်း သိရှိ သွားခဲ့ ကြသည်။
သတ္တမမြောက် ဘေးဒဏ် (မိုးသီးမိုးဖြင့် ဒဏ်ခတ်ခြင်း) (ထွက် ၉း၂၂-၃၅)
ဤနိမိတ်လက္ခဏာ ဘေးဒဏ်မှာ အခြား ကပ်ဘေးများနှင့် မတူ၊ တစ်မူထူးခြားခဲ့သည်။ အဲဂုတ္တုလူများအားလုံးသည် ရွေးချယ် ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ နှုတ်ခပတ်တော်ကို ယုံကြည်သော အဲဂုတ္တုလူများအားလုံး ပြင်ဆင်ခွင့် ရရှိခဲ့ကြသည်။ ယုံကြည်သောသူများ အားလုံးသည် အမိုးအကာအောက်သို့ သွားရောက် ခွင့် ရှိခဲ့သည်။
မိုးသီး၏ အရွယ်အစားမှာ မည်မျှလောက် ကြီးမားသည်ကို မသိနိုင်သော်လည်း ပျက်စီး စေနိုင်လောက်သည့် အရွယ်အစား ဖြစ်ကြောင်း သိရလေသည်။ ထိုမိုးသီးသည် မြေပေါ်သို့ ကျရောက်သောအခါ မီးအသွင် ပြောင်းလဲ လောင်မြိုက်လေသည်။
ဤတစ်ကြိမ်တွင် ဖာရောဘုရင်သည် မိမိတို့မှာ ပြစ်မှားသူဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်ကို အထင်အရှား တွေ့ရပါသည်။ (ထွက် ၉း၂၇-၂၈)။ ဘုရားသခင် သည် ဖြောင့်မက် ကြောင်းကိုလည်း ဝန်ခံ ပြောကြားခဲ့လေသည်။
ဤနိမိတ်လက္ခဏာသည်ကား မိုးကောင်းကင် နတ်ဘုရားမ ဖြစ်သော Nut ကို ရည်ရွယ် နှိပ်ကွပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနတ်ဘုရားမသည် အဲဂုတ္တုလူတုိ့၏ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် အလွန် အားကိုးလေးစားပြီး ကိုးကွယ်မှု ပြုကြသော နတ်ဘုရားမ ဖြစ်ပါသည်။ Nut နတ်ဘုရားမ၏ ခင်ပွန်းမှာ Geb (မြေနတ်ဘုရား) ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနတ်ဘုရား နှစ်ပါးစလုံးကို ဤဘေးဒဏ်ဆိုး ကျရောက်ခြင်းဖြင့် ဒဏ်ခတ်လိုက်ပါသည်။ ကောက်ပဲသီးနှံကို စောင့်ရှောက်သော နတ်ဘုရားမှာ Seth ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနတ်ဘုရားကိုလည်း တစ်ပါတည်း ဆုံးမ ဒဏ်ခတ် လိုက်သည်ကို တွေ့ရ ပါသည်။
ဤနိမိတ်လက္ခဏာ၏ ထူးခြားချက်မှာ အဝတ်ရက်လုပ်သော လျှော်ပင်များကိုသာ ထိခိုက်ပျက်စီးစေပြီး အစားအသောက် အတွက် စိုက်ပျိုးထားသော ဂျုံစပါးနှင့် ကောက်ပင်များကိုမူကား မပျက်စီးဘဲ ချန်ပေးထားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် အမျိုး မျိုးသော အရာတိုင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်း သက်သေ ထူခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်နိုင်ရန် အခွင့်ပေးထားကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။ ထာဝရဘုရားသခင်သည် အသက်ရှင်၍ တန်ခိုးနှင့် ပြည့်ဝစုံလင် တော်မူသော ဘုရားဖြစ်ကြောင်း သက်သေထူခဲ့ပါသည်။
အဌမမြောက် ကပ်ဆိုးဘေး (ကျိုင်းကောင်းများ စေလွှတ်ခြင်း) (ထွက် ၁၀း၁-၂၀)
ဖာရောဘုရင်သည် ထာဝရဘုရား၏ သတိပေးသော နှုတ်ခပတ်တော်ကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ လစ်လျူရှုနေဆဲဖြစ်သည်။ သူသည် ယခင်ကတည်းက ယုံကြည်သော နတ်ဘုရားများနှင့် နတ်ဘုရားမများကို မှီခိုနေဆဲဖြစ်သည်။
ယခု ကျိုင်းကောင်များဖြင့် ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှာ သတ္တမမြောက်ဖြစ်သော မိုးသီးဖြင့် ဒဏ်ခတ်ခြင်း၏ အဆက်ဖြစ်သည်။ မိုးသီးကျရောက်ချိန်က မပျက်စီးဘဲ ကျန်နေသေးသော ကောက်ပဲသီးနှံများကို ဖျက်စီးရန် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
မောရှေနှင့် အာရုံသည် ဖာရောဘုရင်ထံ ဝင်ရောက်ကာ ယခင်အတိုင်း ဟေဗြဲလူများကို လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဖာရော ဘုရင်၏ ခေါင်းမာမှုကြောင့် ဘုရားသခင်က ပြောသည့်အတိုင်း ကျိုင်းကောင်များကို စေလွှတ်ခဲ့ ပါသည်။
ဤနိမိတ် လက္ခဏာသည် အဲဂုတ္တုနတ် ဘုရားတစ်ပါးဖြစ်သော မုန်တိုင်းကို အစိုးရသည် သာမက ကောက်ပဲ သီးနှံများ ကိုလည်း စောင့်ရှောက်သော Seth နတ်ဘုရားကို ဆုံးမ ဒဏ်ခတ် လိုက်ပါသည်။
နောက်ထပ် နတ်ဘုရား တစ်ပါးမှာ Senehem ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနတ်ဘုရားသည် ကျိုင်းကောင်၏ ဦးခေါင်းနှင့် လူကိုယ်ခန္ဓာ ရှိသော နတ်ဘုရား တစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။ ကောက်ပဲသီးနှံများကို ဖျက်စီးတတ်သော အကောင်များကို အကာအကွယ်ပေး သည့် နတ်ဘုရား ဖြစ်ကြောင်း သိမှတ် ယုံကြည်ကြပါသည်။
ဤနိမိတ်လက္ခဏာသည် လူတို့၏ အသက်သွေးကြောဖြစ်သော အစားအသောက်ကို အမှန်တကယ် ပေးမည့်သူ၊ ကျွေးမွေးမည့်သူ၊ မစပံ့ပိုးမည့်သူမှာ ထာဝရ ဘုရားသခင်သာ လျှင်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေထူခဲ့ပါသည်။
နဝမအကြိမ် ကပ်ဘေးဆိုး (မှောင်မိုက်ဖြင့် ဒဏ်ခတ်ခြင်း) (ထွက် ၁၀း၂၁-၂၃)
ဤတစ်ကြိမ် တွင်လည်း ကြိုတင် ကြော်ငြာခြင်း မပြုဘဲနှင့် အဲဂုတ္တုပြည် တစ်လျှောက်လုံးတွင် ထူထပ်သော မှောက်မိုက်ကျ ရောက်စေသည်။ ထိုမှောင်မိုက်မှာ နာရီအနည်းငယ် မျှသာ မဟုတ်။ (၃) ရက် တိုင်တိုင် မှောင်မိုက် လွှမ်းသွားသည်ကို တွေ့မြင် ရပါသည်။ သို့သော် ဟေဗြဲလူတို့ နေရာ တွင် ထိုသို့မဟုတ်။ အလင်းပုံမှန် ရရှိခြင်းဖြင့် ထိုနိမိတ် တန်ခိုးကို ထာဝရဘုရား သခင် ပြုလုပ် ကြောင်း ထင်ရှား စေပါသည်။
အဲဂုတ္တုပြည်တွင် အများဆုံး ကိုးကွယ်မှု ပြုကြသည်မှာ Ra နတ်ဘုရား ဖြစ်သည်။ နေနတ် ဘုရားဟု လူတို့က အသိအမှတ် ပြုကြသည်။ အလင်းရောင်ကို ပေးသည့် နတ်ဘုရား ဖြစ်သည်။ ဤ နတ်ဘုရားသည် နေနှင့် အလင်းကို အမှန်တကယ် အစိုးရသူမဟုတ်ဘဲ စာတန် ဘက်တော်သား မှောင်မိုက်၏ အရှင် တစ်ဦးသာဖြစ်ကြောင်း ထာဝရဘုရားက ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြလိုက်သည်။
Ra သည် ဖာရောဘုရင်များ အားလုံး၏ ဖခင်ဖြစ်ပါသည်။ ဖာရော ဘုရင် ကိုယ်တိုင် ပင်လျှင် နတ် ဘုရားနှင့် နတ်ဘုရားမ တို့၏ အရှင်အဖြစ် လူတို့က ယုံကြည် နေကြပါသည်။
ဟီဘရူး ဘာသာစကားအားဖြင့် Ra ဆိုသည်မှာ မှောင်မိုက် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သူ့ကိုယ်သူ အလင်း၏ အရှင်ဟု ဆိုကာ လူတို့ကို လိမ်လည် လှည့်ဖြားထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သက်သေ ထူလိုက်ပါသည်။
မှောင်မိုက်ဆိုသည်မှာ သေခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ စီရင်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ခြင်းကိုလည်းကောင်း ကိုယ်စားပြုနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသုံးရက်တာ မှောင်မိုက် ကာလအတွင်းတွင် အလွန်ပင် ကြောက်မက်ဘွယ်ရာ ကာယ ရေးရာနှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာတို့၏ အားပြိုင်မှုကို အကြီးအကျယ် ခံစားရမည်မှာ မြေကြီး လက်ခတ် မလွဲပင် ဖြစ်ပေ လိမ့်မည်။
ဒဿမအကြိမ် ကပ်ဆိုးဘေး (သားဦများကို ဒဏ်ခတ်ခြင်း) (ထွက် ၁၁ နှင့် ၁၂)
ဖာရောသည် မှောင်မိုက် ကျသည့် ကပ်ဘေးကြီကို ကျော်လွန်ရန်အတွက် မောရှေနှင့် အာရုန်ကို ဟေဗြဲ လူမျိုးများအား လွှတ်ပေး ပါမည်ဟု ကတိပေးခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ယဇ်ပူဇော်ရန် သိုးနွားများကို သယ်ယူခွင့် မပြုခဲ့ချေ။ မှောင်မိုက်ကို ရှင်းလင်း ဖယ်ရှားပြီးသောအခါ တစ်ဖန်ပြန်လည်၍ ခေါင်းမာကာ မလွှတ်ဘဲ နေပြန်လေသည်။ ထိုမျှမက နောက်တဖန် မတွေ့ မမြင် လိုဟု ပြောဆို၍ တွေ့လျှင် သတ်ပစ်မည် ဟူ၍ ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုခဲ့လေသည်။
ဤနိမိတ် နောက်ဆုံး လက္ခဏာ ကပ်ဆိုးကြီးမှာ ဖာရော ဘုရင်ကို ဒဏ်ခတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဖာရော ကိုယ်တိုင် ပင်လျှင် အဲဂုတ္တု ပြည်၏ နတ်ဘုရား တစ်ပါး ဖြစ်သည်ဟု တိုင်းသူ ပြည်သား များက ယုံကြည်ကြသည်။ ဖာရော ဘုရင်၏ သားဦသည် ဖာရောဘုရင် ၏ ထီးနန်ကို ဆက်ခံကာ အဲဂုတ္တု တိုင်းပြည်၏ နတ်ဘုရား တစ်ပါး အဖြစ်သို့ ခံယူလိမ့်မည် မဟုတ် ပါလား။
အဲဂုတ္တုပြည်မှ သားဦးများနှင့် တိရစ္ဆာန် သားဦး များသည် မကြာခဏ ယဇ်ပူဇော် ခံရလေ့ ရှိသည်။ ဖာရော ဘုရင်သည် Ra နေ နတ်ဘုရားနှင့် Osiris အသက် ပေးသော နတ်ဘုရား ဝင်စားသည်ဟု လူတို့က ယုံကြည် သတ်မှတ် ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဖာရော ဘုရင် သည်လည်း နတ်ဘုရား တစ်ပါး ဖြစ်ပေသည်။
ဤနိမိတ် ကပ်ဆိုးကြီးသည် အဲဂုတ္တု လူမျိုးအားလုံး အပေါ်သို့ ကျရောက်စေကာ ထိုလူမျိုး အားလုံးကို နှိပ်ကွပ် လိုက်လေ တော့သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ဟေဗြဲလူမျိုးများကို မညှာမတာ ရက်ရက် စက်စက် စေခိုင်းကာ ကျွန်ပြုခဲ့ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ထိုနိမိတ် လက္ခဏာ ပြုလုပ်မည့် နောက်ဆုံးညတွင် ဟေဗြဲလူတို့ အတွက် ပဿခါ ပွဲတော်ကို စီရင် ကျင်းပ စေခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပဿခါ သိုးငယ်၏ အသွေးကို အိမ်တံခါး တိုင်များတွင် သုတ်လိမ်းကာ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည် ကြောင်း သက်သေ ထူခိုင်းခဲ့သည်။ ထိုသို့ သက်သေ မထူသော သူများ ပဿခါ ပွဲတော်ကို မယုံကြည် သောသူများကို စီရင်ရန် ကောင်းကင် တမန်သည် ထိုနေ့ညတွင် အဲဂုတ္တု တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ထုပ်ခြင်းခပ် ဖြတ်သန်း သွားပြီးနောက် ထိုမယုံကြည်သော အဲဂုတ္တု အမျိုးသားများ၏ သားဦးများကို သုတ်သင် ဖျက်စီး လိုက်လေတော့သည်။
ထိုနေ့ ညတွင် ဟေဗြဲ အမျိုးသားများ အားလုံးသည် လွတ်မြောက်ခွင့် ရရှိခဲ့ကြပြီး အိမ်နီးချင်းများမှ လက်ဝတ် ရတနာများ ကို စိတ်လို လက်ရ ထုပ်ပေးခဲ့ ကြသည်။ မြန်မြန် ထွက်သွား ရန်လည်း နှင်ထုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် အဲဂုတ္တု ပြည်မှ ထွက်ခွင့် ရရှိခဲ့ ကြလေသည်။
ဘုရားသခင်သည် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ဘုရားများကို အထက်ပါအတိုင်း ဒါဏ်ခတ် စီရင်လိုက်ခြင်းဖြင့် လောကကြီး တစ်ခုလုံးကို ဖန်ဆင်းရှင်နှင့် တန်ခိုး ကြီသော အရှင်ဖြစ် ကြောင်း သက်သေ ထူခဲ့လေသည်။
ဤဆောင်းပါးကို အောက်ပါ website များကို လေ့လာဖတ်ရှုပြီး မှီငြမ်းရေးသားထားပါသည်။
အောင်မြင်ခြင်း နှင့် ရှုံးနိမ့်ခြင်း
Posted by ဦးမင်းလွင် on 19/05/2013
ထွက်မြောက် ရာကျမ်း ၁၇း၁-၇ တွင်
ဣသရေလ အမျိုးသား ပရိသတ် အပေါင်းတို့သည်၊ ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ သည်အတိုင်း၊ သိန်တော ထဲက ထွက်၍ ခရီးသွား သဖြင့်၊ ရေဖိဒိမ် အရပ်၌ စားခန်းချကြ၏။ ထိုအရပ်၌ လူများ သောက်ဘို့ရာ ရေမရှိ။ ထိုကြောင့် လူများတို့က၊ သောက်ဘို့ရေပေးပါဟု ဆို၍ မောရှေကို ရန်တွေ့ကြ၏။ မောရှေကလည်း၊ ငါ့ကို အဘယ်ကြောင့် ရန်တွေ့ ကြသနည်း။ ထာဝရဘုရားကို အဘယ်ကြောင့် စုံစမ်းကြ သနည်းဟု ဆိုလေ၏။ လူများတို့သည် ရေငတ်၍ မောရှေကိုအပြစ်တင်မြည်တမ်းလျက်၊ ငါတို့မှစ၍ သားသမီးတိရစ္ဆာန်တို့ကို အဝတ် ထား၍ သတ်ခြင်းအလို့ငှါ၊ အဲဂုတ္တုပြည်မှ အဘယ်ကြောင့် ဆောင်ခဲ့သနည်းဟု ဆိုကြ၏။ ထိုအခါမောရှေ သည် ထာဝရ ဘုရား အားအော်ဟစ်၍၊ ဤလူတို့အား အကျွန်ုပ်သည် အဘယ်သို့ပြု ရပါမည်နည်း။ အကျွန်ုပ်ကို ခဲနှင့် ပစ်လုကြပါပြီဟု လျှောက်လေ၏။ ထာဝရ ဘုရားက လည်း၊ လူများရှေ့ သို့သွား၍ ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီး သူတို့ကိုခေါ်လော့။ မြစ်ကိုရိုက်သော သင်၏ လှံတံကိုကိုင် လျက်၊ ဟောရပ်အရပ်သို့သွားလော့။ ထိုအရပ်၌ရှိသော ကျောက်ပေါ်တွင် သင့်ရှေ့မှာ ငါရပ်နေမည်။ သင်သည် ထိုကျောက်ကို ရိုက်ရမည်။ လူများသောက်ဘို့ ထိုကျောက်ထဲကရေထွက်လိမ်မည် ဟုမောရှေအား မိန့်တော်မူ၏။ မောရှေသည်လည်း ဣသရေလ အမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ရှေ့မှာ ထိုသို့ပြုလေ၏။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့က၊ ထာဝရ ဘုရားသည် ငါတို့တွင် ရှိသလော မရှိလောဟု ထာဝရဘုရားကို စုံစမ်း၍ ရန်တွေ့သော အကြောင်းကြောင့်၊ ထိုအရပ်ကို မဿာနှင့် မေရိဘဟု သမုတ်သတည်း။
ဣသရေလ လူမျိုးများ တောထဲတွင် လှည့်လည်နေရသော အချိန်က ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ လှည့်လည်နေရင်း မောပန်းသောအခါ အနားယူရန် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ထိုနေရာတွင် အဆင်ပြေ သင့်တော်မည့် ကာလတစ်ခုအထိ စခန်းချ အနားယူရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ပါသည်။ ထိုကြောင့် လူ တိုင်း အာရ ဝမ်းသာဖြစ်ကာ ထိုနေရာတွင် အနား ယူခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် ထိုနေရာတွင် ရေမရှိ သောကြောင့် အဆင်ပြေ ကောင်းမွန်သည်ဟု မဆိုနိုင်ချေ။ ခေါင်းဆောင်ကြီး မောရှေ အနားယူ စခန်းချရန် ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်သော နေရာမှာ ရေမရှိသောကြောင့် ကောင်းမွန်သည်ဟု မဆိုနိုင်ချေ။ ထိုနေရာမျိုးတွင် စခန်းချ အနားယူရန် ဆုံးဖြတ်သည့် မောရှေကို ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ဟု ဣသရေလ လူတို့ မသတ်မှတ်ခဲ့ချေ။ ထို့ကြောင့် မောရှေထံ သွားရောက်ကာ အပြစ် တင် ပြောဆိုခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ မောရှေက အဘယ်ကြောင့် ငါ့ကို အပြစ်တင် ပြောဆိုပါသနည်း။ အဘယ် ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို စုံစမ်းပါသနည်း ဟူ၍ ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်။ လူများက အပြစ်တင် ပြောဆိုခံ ရသည်သာမက ခဲနှင့်ပေါက်ရန် ကြိုးစားသည့် အခြေအနေ အထိရောက်လာသောအခါ မောရှေသည် ဘုရား သခင်ထံ အော်ဟစ်ခဲ့ကြောင်း အခန်းငယ် (၄)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဘုရားကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု စုံစမ်းသူများ
ထိုအခါ ဘုရားသခင်က မောရှေအား အသက်ကြီးသူများနှင့် ဣသရေ လူမျိုးများကို ကျောက်တုံး ရှိရာနေရာသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ထိုကျောက်တုံးကို လှံတံနှင့်ရိုက်ရန် မှာကြား ပြောဆို ခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ ဘုရားသခင် ပြောသည့်အတိုင်း ပြုလုပ်လိုက်သောအခါ ထိုကျောက်ထဲမှ ရေ ထွက် လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဣသရေလ လူမျိုးများ မျှော်လင့် တောင့်တနေသော ရေကို ရရှိခဲ့လေ သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကို မိတ်ဆွေ ပြန်လည် သုံးသပ်ကြည့်ကြပါစို့။ ဣသရေလ လူမျိုးတို့၏ အမျှော်လင့်ဆုံး အတောင့်တဆုံး ရရှိခဲ့သည့် အတွက် အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့သည် သတ်မှတ် နိုင်သည် မဟုတ်ပါလား။
သို့သော်လည်း သမ္မာကျမ်းစာက ထိုအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ပြောဆိုရာတွင် ဘုရား သခင်၏ စိတ်တော်၌ ကျေနပ်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ခဲ့သည်မို့ ထိုသူတို့၏ အောင်မြင်ခြင်းဟု မသတ် မှတ်နိုင်ချေ။ ထိုနေရာကို သမ္မာ ကျမ်းစာက မဿာနှင့် မေရိဘ ဟု ခေါ်ဆို သမုတ်ခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်း တင် ရေးသားထားပါသည်။ ထိုစကား လုံးများသည် ဟီးဘရူး အခေါ်အဝေါများ ဖြစ်ပြီး မဿာ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ စုံစမ်းခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ် ရှိပါသည်။ မေရိဘ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ဆန့်ကျင်ဘက် ပြုခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ် ရှိပါသည်။ ထိုစကား နှစ်ခုစလုံးမှာ ဘုရားသခင်ကို သာ ဦးတည် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအဖြစ်အပျက်ကို ပြန်လည် သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ရေဖိဒိမ် အရပ်တွင် ရောက်ရှိလာသည်။ ထိုနေရာတွင် စခန်း ချကြသည်။ ထိုနေရာတွင် သောက်သုံးရေမရှိ၊ အဆင်ပြေသော နေရာမဟုတ်ချေ။ ထိုနေရာတွင် စခန်းချရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် မည်သူ၏အမှားနည်း။ ထိုအမှားကို အခြေခံကာ တစ် ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြစ်တင် ပြောဆိုချင်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ နားလည်သင့်သည်မှာ မည်သူ့ထံမျှ အပြစ်မရှိချေ။ မောရှေတွင် အပြစ်မရှိချေ။ ဘုရားသခင်ကိုလည်း အပြစ်တင်လို့ မရချေ။ ထိုနေရာတွင် ရေမရှိ၊ အဆင်မပြေသော နေရာဖြစ်သော်လည်း မည်သူကိုမျှ အပြစ်တင် ပြောဆို၍ မရချေ။
ကျွန်တော်တုိ့၏ အသက်တာထဲတွင် အဆင်မပြေသောအချိန်၊ အားနည်းသော အချိန်များ တွင် မည်သူ့ကိုမျှ အပြစ်တင် ပြောဆို၍ မရချေ။ မည်သူ့တွင်မျှ အပြစ်မရှိပါ။ ထိုအခြေအနေကို ဘုရား သခင်က လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလား။ အဆင် မပြေသော အခြေအနေ၊ အချိ်န်အခါ မျိုးကိုလည်း ဘုရားသခင် ပြင်ဆင်နေကြောင်း နားလည်ရမည် မဟုတ်ပါလား။ ထိုအခြေအနေကို ဘုရားသခင်ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ ခံယူရမည် ဖြစ်သည်။ ယောသပ်၏ အသက်တာထဲတွင် ညီအကို တော် စပ်သောသူများက သူ့ကို ရေတွင်းထဲမှာ ချသည်။ ရောင်းစားသည်။ ယောသပ်အနေဖြင့် ညီအကို များကို အပြစ်တင်ခွင့် ရှိသည်မဟုတ်ပါလား။ သို့သော် ယောသပ်ကိုယ်တိုင် နားလည်ခဲ့ သည်မှာ ထိုအခြေအနေသည် ညီအကိုများက ပြုလုပ်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်က ပြင်ဆင် ဆောင် ရွက် ခဲ့သည်ဟု နားလည်ခဲ့ပါသည်။
ဘုရားပေးသောနာမည်နှင့် လူပေးသော နာမည်
ယနေ့ ကျွန်တော်တို့၏ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို ဘုရားသခင်က နာမည်တစ်ခု ပေးနေပါသည်။ ကျမ်စာထဲတွင် ရေဖိဒိမ် အရပ်တွင် ရေထွက်လာသော အရပ်ကို မဿာနှင့် မေရိဘဟူ၍ အမည် ပေးခဲ့ပါသည်။ မကောင်းသော အဓိပ္ပါယ်နှင့် ထိုနာမည်ကို ပေးခဲ့လေသည်။ “စုံစမ်းခြင်းနှင့် ဆန့်ကျင် ဘက်ပြုခြင်း” ဟု အမည်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်တော်တို့၏ အသက်ရှင် လှုပ်ရှားနေ သည် နေရာ၊ လုပ်ဆောင်သည့် အမှုကို ဘုရားသခင်က နာမည်တစ်ခု ပေးနေပါသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အသင်းသားများ လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာက ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် အမည်သစ်တစ် ခု ကို ရစေပါသည်။ သင်မည်ကဲ့သို့ အသင်းတော်ကို အမည်ပေးနေပါ သနည်း။ ယနေ့ လူများ အမည် ပေး မှည့်ခေါ်ဆိုသော အမည်နှင့် ဘုရားသခင်ပေးသော နာမည်မှာ ကွာခြား နေ ပါ လိမ့်မည်။ ကျမ်းစာ တွင် လူ၏ အမည်မှာ “အာဗြံ” ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်က “အာဗြဟံ” ဟု နာမည်ပေး မှည့်ခေါ် ခဲ့သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာတွင် “ရှိမုန်” ကို “ပေတရု” ဟူ၍ လည်းကောင်း အမည်နာမ ပေးမှည့် ခေါ်ခဲ့ ပါသည်။ သင့်ကို ဘုရားသခင်က မည်ကဲ့သို့ နာမည်ပေးမည်ဟု ထင်ပါသနည်း။ သင်၏ တုန့်ပြန်လှုပ် ရှား မှုအပေါ်တွင် မူတည်ကာ ဘုရားသခင်က အမည်ပေး မှည့်ခေါ်လျှက် ရှိပါသည်။
ခရစ်တော်ကို လှံတံနှင့် ရိုက်သောသူများ
အထက်ပါ လေ့လာချက် အရ ဣသရေလ လူမျိုးများသည် အောင်မြင်ခြင်း မရခဲ့ပါ။ ရှုံးနိမ့် ခြင်းကိုသာ ရရှိခဲ့သည် မဟုတ်ပါလော။ ထိုအဖြစ် အပျက်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ၁ကော ၁၀း၎ တွင် ဖေါ်ပြထားသည်မှာ
“ထိုသူတို့နှင့် အတူလိုက်သော ဓမ္မကျောက်မှ ထွက်သောရေကို သောက်ကြ၏။ ထိုကျောက်ကား ခရစ်တော် ဖြစ်သတည်း။” (၁ကော ၁၀း၎)
ထိုကျမ်းချက်အရ မောရှေလှံတံနှင့် ရိုက်သော ကျောက်မှာ ခရစ်တော် ဖြစ်နေသည်ဟု ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ၀ိညဉ်ရေး ရာ အားနည်းသော အချိန်၊ ယုံကြည်ခြင်း အားနည်းနေသည့် အချိန်များတွင် ခရစ်တော်ကို ရိုက်နှက် နေသူ၊ ကျောက်တုံးဖြင့် ပစ်နေသူများ ဖြစ်နေသည် မဟုတ်ပါလား။ သခင်ယေရှုသည် လက်ဝါးကား တိုင်တွင် အသေခံခဲ့သည်။ လက်ဝါးကားတိုင်းတွင် သေပြီး နောက် ရောမစစ်သားများက သခင်ယေရှု ၏ နံဘေးကို လှံနှင့် ထိုးဖောက်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုထံမှ သွေးနှင့် ရေ ထွက်လာခဲ့သည်။ “သွေး” ဆိုသည်မှာ သခင်ယေရှု၏ “ခွင့်လွှတ်ခြင်း”ကို ကိုယ်စားပြုနေပါသည်။ ရေဆိုသည်မှာ သခင်ယေရှု ၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ကိုယ်စားပြုနေပါသည်။ ထို “ယေရှုခရစ်” ဆိုသော ကျောက်မှ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာများ စီးထွက်လာပါသည်။ လူများစွာ ထိုကောင်းကြီး မင်္ဂလာကို ခံစားရပါသည်။ သခင်ယေရှု သည် လူတိုင်းကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းသာမက ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုလည်း ခံစားစေပါသည်။ ခရစ် တော်ကို နာကျဉ်စေသော သူတိုင်းကို ဘုရားသခင်က ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာများ ကို စီးဆင်းစေပါသည်။
ရှုံးနိမ့်ခြင်းထဲမှ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်
ကျမ်စာထဲတွင် ရေဖိဒိမ်အရပ်ကို မဿာနှင့် မေရိဘ ဟူ၍ ယနေ့တိုင် ခေါ်ဆိုနေကြောင်း ကျမ်းစာက မှတ်တမ်း တင်ထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းမှ ဟေဗြဲကျမ်းတွင် ရေးသားထားသည်မှာ ဣသရေလ လူများကဲ့သို့ မလုပ်နှင့် ဟူ၍ ပြောထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်း အားနည်းသော အပြုအမှု လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုံးဝ မလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချရမည်ဖြစ်သည်။ အထက်ပါ အဖြစ်အပျက်သည် ဣသရေလ လူမျိုးတို့၏ ရှုံးနိမ့်ခြင်း အတွေ့အကြုံ ဖြစ်ပြီး၊ ထိုအထဲတွင် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်လည်း ရှိနေကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့ကို အောင်မြင်ခြင်းလည်း ပေးချင်ပါသည်။ ထွက်မြောက်ရာ ၁၇း၈-၁၃ ကို ဆက်လက် ဖတ်ရှုလေ့လာပါက ဣသရေလ လူမျိုးတို့၏ အောင်မြင်ခြင်းကိုလည်း ဆက်လက် သွန်သင်ပေးနေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ထိုရေဖိဒိမ်အရပ်တွင် ရေသောက်ပြီး ဆက် လက် အနားယူနေစဉ် အာလလက် လူမျိုး ရန်သူများ ရောက်ရှိလာပြီး ဣသရေလ လူများကို ရန် ဘက် ပြု စစ်တိုက်လေတော့သည်။ မောရှေနှင့် ယောရှုသည် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ယောရှုမှာ ရန်သူ များ ကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် ဦးဆောင်ရပြီး မောရှေမှာမူ အာရုန်နှင့် ဟုရကို ခေါ်ဆောင်ကာ တောင်ပေါ် တွင် ဆုတောင်းပေးခြင်း အမှုကို ပြုရလေသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဣသရေလ လူမျိုးများ အောင်မြင်မှု ရရှိသွားခဲ့လေသည်။
ဤအဖြစ်အပျက်မှာ အသင်းတော်နှင့် အလွန်ကိုက်ညီသော အဖြစ်အပျက် ဖြစ်ပါသည်။ မောရှေသည် တောင်ပေါ်တွင် ဆုတောင်းရပြီး ယောရှု ဦး ဆောင်သော သူများမှာ စစ်ပွဲတွင် ပါဝင်ရသည် အာရုန်နှင့် ဟုရမှာ မောရှေကို အကူအညီပေးရသည်။ မောရှေသည် လက်ကို မြှောက်ပြီး ဆုတောင်း ချိန်တွင် စစ်ပွဲမှာ အနိုင်ရသည်။ မောရှေ လက်ကို ချသောအခါ စစ်ပွဲ ရှုံးနိမ့်ရသည်။ သင်ကိုယ်တိုင် လက်ကို မြှောက်ကြည့်ပါ။ မည်မျှကြာအောင် မြှောက်နိုင်သနည်း။ လက်ထဲတွင် လှံတန်ကို ကိုင်ထားရသောကြောင့် ပိုမို ခက်ခဲမည်ဟု ထင်ပါသည်။ ယောရှုသည် မောရှည်ကိုလည်း မနာလို မဖြစ်ခဲ့ပါ။ အာရုန် နှင့် ဟုရကိုလည်း မနာလို မဖြစ်ခဲ့ပါ။ မိမိလုပ်ဆောင် ရသည့် အလုပ်ကိုသာ မညည်းတွားဘဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
အသင်းတော်အတွက် အလွန်ကောင်းသော ပုံဥပမာ တစ်ခု ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလား။ မိမိ တာဝန် ဘာဖြစ် သည်ကို လူတိုင်း သိဘို့ လိုအပ်ပါသည်။ မိမိ လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားကို ကျေပွန်ဘို့ လိုအပ်ပါ သည်။ ထိုစစ်ပွဲတွင် မပါဝင်နိုင်သော မိန်းမနှင့် ကလေးများက ချက်ပြုတ်မည်။ လူမမာများကို ပြုစုမည်။ ဒါဏ်ရာ ရသူများကို ကြည့်ရှုမည်။ အစရှိသဖြင့် တာဝန် အသီးသီး ရှိကြသည် မဟုတ်ပါလား။ မည်သူ့ကိုမျှ ငြူစူခြင်း၊ မနာလိုခြင်း မရှိခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဣသရေလလူမျိုးတို့ အောင်မြင်ခြင်း ရရှိခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အောင်မြင်ရန်အတွက် ဆုတောင်း ခြင်းသည် အလွန် အရေးကြီးပါသည်။ မောရှေ ဆုတောင်းခြင်း ပျက်ကွက်သည့် ခဏမှာ အရှုံးနှင့် ရင်ဆိုင်ရပြီး၊ ပြန်လည်ဆုတောင်းနိုင်သည့် ခဏမှာ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့ပါသည်။ အသင်းတော် အ တွက် ထိုအဖြစ်အပျက်မှာ ပုံသက်သေ နမူကောင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
ငိုကြွေးရာအရပ်ကို စမ်းရေထွက်ရာအရပ် ဖြစ်စေသူ
ကိုယ်တော်ကို အားပြုသောသူသည် မင်္ဂလာ ရှိပါ၏။ ထိုသို့သော သူတို့သည် လမ်းခရီး တော်တို့ကို နှလုံးသွင်း တတ်ကြပါ၏။ သူတို့သည် ဗာကာလွင်ပြင်၌ ရှောက်သွားစဉ်၊ ထိုလွင်ပြင်ကို စမ်းရေထွက်ရာ အရပ်ဖြစ်စေကြ ပါ၏။ အရင်မိုးရေလည်း မင်္ဂလာများနှင့် လွှမ်းစေပါ၏။ (ဆာလံ ၈၄း၅-၆)
အထက်ပါ ကျမ်းချက်ကို လေ့လာကြည့်ပါက “ဗာကာ” ဟူသော လွင်ပြင်အရပ်ကို တွေ့ရပါ သည်။ ထိုနာမည်မှာ “ငိုကြွေးခြင်း” ဟု အမည်ရှိပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယုံကြည်သူများတွင် အားနည်းခြင်း၊ ငိုကြွေးရခြင်းတို့ ရှိနိုင်သော အချိန်ကာလတစ်ရပ် ရှိပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဆာလံဆရာက ဘုရားကို အားကိုးခြင်းဖြင့် “စမ်းရေ ထွက်ရာအရပ်” ဖြစ်စေကြသည် ဟု ဆိုထားပါသည်။ ဘုရား သခင်ကို အားကိုးခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းတို့ဖြင့် “ငိုကြွေးရာအရပ်” ကို “စမ်းရေထွက်ရာအရပ်” ဟု အမည် သစ်ကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။ သင်၏ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သင်၏ ငိုကြွေးရာ အရပ်ကို အမည်သစ် တစ်ခု ပေးဘို့ ဆုတောင်းကြပါဟု တိုက်တွန်းဝေငှလိုပါသည်။ အာမင်
မှတ်တမ်းတင်ရမည့် သမ္မာကျမ်းစာမှ မိခင်များ
Posted by ဦးမင်းလွင် on 11/05/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: မိခင္.	1 Comment
သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် အမည်နာမ ဖော်ပြသော မိခင်များ၊ မဖော်ပြသော မိခင်များ အများအပြား ရှိပါသည်။ သို့သော် ယုံကြည်သူများ အတွက် တစ်စုံ တစ်ရာ သင်္ခန်းစာယူ အသက်ရှင်ရန် သင်ကြားပေးခဲ့သော မိခင်ကြီးများ ရှိနေပါသည်။ ထိုမိခင်ကြီးများအနက် မိခင်ကြီး (၈) ယောက်အကြောင်းကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ သူတို့နှင့် ပတ်သတ်ပြီး အကျယ်တဝန့် ကြည့်ရှုလိုပါက သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ဆက်လက် လေ့လာဘို့ တိုက်တွန်း လိုက်ပါသည်။
ဧဝ (အသက်ရှင်သောသူများအားလုံး၏ အမိ)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၂) နှင့် (၃) ကိုဖတ်ပါ။
ဧဝသည် ပထမဆုံးသော ဖန်ဆင်းခံရသော မိန်းမလည်း ဖြစ်ပြီး ပထမဦးဆုံးသော မိခင်ကြီး တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ အသက် ရှင်သော သူများ အားလုံး၏ မိခင်ကြီး ဖြစ်သည်။ အာဒံနှင့်အတူ ဧဒင် ဥယျဉ်ကြီးထဲတွင် အသက်ရှင်ခဲ့ပြီး အချိန်ကာလ အတိုင်း အတာ တစ်ခု အထိ ထိုဥယျာဉ်ကြီးတွင် နေခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ စာတန်၏ လှည့်စားမှုကို ခံစားခဲ့ရပြီး ရာဇဝင် သမိုင်းတွင် မှတ်တမ်း မလှသူ ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အာဒံကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး အထောက်အမ ပေးခဲ့သူ ဖြစ်သော်လည်း အခြေ အနေက သူမကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ သူမသည် ကာဣန နှင့် အာဗေလ ဟူသော သားများကို မွေးဖွားစဉ်အခါ အာဒံမှအပ အကူအညီ ပေးမည့်သူ မရှိသောကြောင့် ကြီးစွာသော ဝေဒနာ ခံစားကာ သားများကို မွေးဖွားခဲ့ရသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ပထမဦးဆုံးသော မိခင်ကြီး ဖြစ်သောကြောင့် သူမထံမှ အားနည်းချက် များကို ဆင်ခြင်ပြီး မိမိ၏ အသက်တာတွင် သင်္ခန်းစာယူ အသက်ရှင်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာကို ရယူ ခံစားကြ ပါစို့။
စာရာ (အာဗြဟံ၏ ဇနီး)
ကမ္ဘာဦး အခန်းကြီး ၁၂ မှ ၂၂ တွင် ရှိသော အကြောင်းအရာများအနက် စာရာအကြောင်းကို ရွေးဖတ်ပါ။
ဧဝ ၏ အသက်တာကို ကျမ်းစာက မှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက် နောက်ထပ် အမျိုးသမီးများ၏ အမည်ကို ထပ်မံ မတွေ့ရ တော့ဘဲ နှစ်ပေါင်း အတန်ကြာမှ မိခင်ကြီး တစ်ဦးကို ထပ်မံ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သူမှာ စာရဲ မှ အမည် ပြောင်းလဲ ပေးလိုက်သော စာရာ ဖြစ်သည်။ ဣသရေလ အမျိုးသားများ၏ မိခင်ကြီး ဖြစ်ပြီး ဖခင်ကြီး အာဗြဟံ၏ အထောက်အမ ကောင်းတစ်ဦး အဖြစ် ကျမ်းစာက မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။ စာရာသည် မြုံသော မိန်းမ တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း အသက်ကြီးကာမှ နိမိတ်လက္ခဏာ တစ်ခု အနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခွင့် ရခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို ဖြည့်ဆီးချင်လွန်းသည်က တစ်ကြောင်း၊ ခင်ပွန်း၏ သားယောက်ျားလိုချင်သော နှလုံးသားကို ဖြည့်ဆီးချင်သည်က တစ်ကြောင်း ကြောင့် မိမိခင်ပွန်းကို မိမိ၏ ကျွန်မ ဟာဂရနှင့် ပေါင်းဖတ်စေခဲ့ပါသည်။ သို့သော် မိမိ ထင်သလို ဖြစ်မလာခဲ့ချေ။ ဘုရားသခင်က လက်မခံနိုင်သလို၊ ကျွန်မ ဟာဂရ ကလည်း ဂုဏ်မောက် အန်တုလာသောကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
သို့သော် ဘုရားသခင်က သူမကို သားယောက်ျား တစ်ဦးကို ပေးသနားခဲ့သဖြင့် စိတ်ပျော်ရွှင်မှုခံစားရပါသည်။ သူမ၏ ယောက်ျား အပေါ်ထားသည့် စိတ်နှလုံးသားနှင့် ဘုရားသခင်အပေါ်ထားသည့် ယုံကြည်ခြင်း နှလုံးသားသည် ယနေ့ မိခင်များ အတွက် စံနမူနာ ဖြစ်ပေတော့သည်။
ရေဗက္ကာ (ဣဇတ်၏ ဇနီး)
ကမ္လာဦးကျမ်း ၂၄ မှ ၂၇ အထိ ဖတ်ပါ။
ရေဗက္ကာသည် ယောက္ခမ ဖြစ်သော စာရာကဲ့သို့ပင် မြုံသောသူ ဖြစ်ပြီး ယောက္ခမ၏ အသက်ရှင်မှု အတွေ့အကြုံများ အတိုင်း ခံစားခဲ့ ရသူဖြစ်သည်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဣဇတ်၏ ဆုတောင်း မှုကြောင့် အမွာ သားယောက်ျား နှစ်ဦးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင် ခဲ့ရပါ သည်။ ဧသောနှင့် ယာကုတ်သည် ရေဗက္ကာ၏ ဝမ်းထဲမှာပင်လျှင် အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်နေသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသား နှစ်ယောက်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး မမွေးခင်ကပင် ကြိုတင် ပရောဖတ် ပြုချက် ရထားသဖြင့် အငယ်ဖြစ်သော သားက ပိုမို၍ ချီးမြှောက်ခြင်း ခံစားရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိထားသဖြင့် သားငယ်ကို ပိုမို၍ မျှော်လင့်ချက်ထားကာ ပိုမို မြှောက်စားခဲ့ပုံ ရပါသည်။ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူက သားကြီးကို ကောင်းကြီးပေးမည်ဟု ပြောဆိုသောအခါ သားငယ်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူသည့် အတိုင်း မဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်ခဲ့သလား မသိပါ။ သားငယ်ကိုသာ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားရစေရန် အတင်း စီစဉ်၍ ခင်ပွန်းသည်၏ ကောင်းကြီးပေးမည့် အစီအစဉ်အတွင် သားငယ်ကို အတင်းထိုးထည့်ခဲ့သလား ဟု တွေးတော မိပါသည်။ ထိုအချက် ကြောင့်ပင် ချစ်သော သားငယ်နှင့် ကွေကင်း ဝေးကွာခဲ့ရပါသည်။
ရေဗက္ကာ၏ အသက်ရှင်မှုသည် မိခင်များကို သားသမီးများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး မိမိကဲ့သို့ မမှားစေရန် တစ်စုံတစ်ရာ သွန်သင်နေ သည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
ယောခေဗတ် (မောရှည်၏ မိခင်)
ထွက် ၂း၁-၈၊ ထွက် ၆း၂၀၊ တောလည် ၂၆း၅၉ ကိုဖတ်ပါ။
မောရှည်၏ မိခင်ကြီးဖြစ်သော ယောခေဗတ်သည် ကျမ်းစာထဲတွင် ကျွန်တော် သဘောကျ လေးစားမိသော မိခင်ကြီး ဖြစ်ပါသည်။ စိုးရိမ် ကြောက်မက်ဘွယ်ရာ အခြေအနေဆိုးထဲတွင် ကလေးကို မွေးဖွားခဲ့ရသည်။ မွေးဖွားပြီ အချိန်တွင်လည်း ထိုကလေးကို သုံးလပတ်လုံး အကြောက်တရား၏ အောက်တွင် စောင့်ရှောက်ခဲ့ရသည်။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်း အရာတွင် ကြီးမားပြင်းထန်ပြီး ဆုတောင်းကာ ပြဿနာ အခက်အခဲ၏ အောက်တွင် မိမိ၏ သားသမီးများကို မွေးဖွား စောင့်ရှောက်ခဲ့ရသည်။ မောရှည်ကို မွေးဖွားပြီးသောအခါ သုံးလပတ်လုံး ဝှက်ထားခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး မတတ်သာသည့် အချိန်တွင် နိုင်းမြစ်ထဲသို့ ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်ပြီး မျှောလိုက်လေတော့သည်။ သူမ၏ ဆုတောင်းကို ဘုရားသခင်က နားညောင်းသောကြောင့် ထိုကလေးသည် ရန်သူဖြစ်သော ဖာရောဘုရင်၏ သမီးတော်က ရေမှ ဆယ်ယူကာ ကောက်ယူ မွေးဖွားလိုက်လေတော့သည်။ ထို့ကြောင့် အခက်အခဲမရှိ ထိုကလေး (မောရှည်)သည် ကြီးပြင်းခွင့်ရခဲ့ပြီး ကောင်းမွန်စွာ ပညာသင်ကြားခွင့် ရခဲ့လေသည်။ ထိုအခြေအနေကို ရောက်ရန် မိမိ၏ သမီးဖြစ်သူ မိရိအံက အခြေအနေကို လိမ္မာစွာ အသုံးချပြီး မိခင်နှင့် မောရှည်ကို အတူတကွ နေထိုင်ခွင့်ရရန် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လေသည်။
ယောခေဗတ်၏ ယုံကြည်ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်းတို့သည် ဝိညာဉ်ရေးရာတွင် အားကျ အတုယူ လေးစားဘွယ်ရာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမျှမက သားသမီးများကို သူမ၏ သွန်သင်မှု စနစ်ကြောင့် သမီးဖြစ်သူ မိရိအံသည် ပရောဖတ်မ အဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ အာရုန်ဆိုလျှင် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မောရှည်ဆိုလျှင် မိမိလူမျိုး၏ အကြီးအကဲ ခေါင်းဆောင်ကြီး၊ တရားသူကြီး၊ ပရောဖတ် စသည်ဖြင့် ဘုရားသခင် အသုံးပြု ခံရသော လူများ ဖြစ်လာကြသည်မှာ အားကျ အတုယူဘွယ် ဖြစ်ပါတော့သည်။
ဟန္န (ရှမွေလ၏ မိခင်)
ဓမ္မရာဇဝင် ပထမစောင် အခန်းကြီး (၁) နှင့် (၂) ကိုဖတ်ပါ။
ဟန္နသည် ကျမ်းစာထဲတွင် ပြောစမှတ် အကောင်းဆုံး မိခင်ကြီး ဖြစ်သည်။ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာမည် (သို့) သင်ကြားမည်ဆိုလျှင် သူမအကြောင်း မပါလျှင် မဖြစ်ချေ။ နှစ်အတန်ကြာအောင် မြုံသောသူအဖြစ် ကြေကွဲစွာ နေထိုင်ခဲ့ရပြီး၊ အခြား ယှဉ်ပြိုင်ဘက်များ၏ ထိကပါး ရိကပါး အပြောခံ ဘဝဖြင့် အသက်ရှင် နေထိုင် ခဲ့ရသည်။ သို့သော် ဟန္နသည် ဘုရားသခင်ကို အပြစ်တင် ပြောဆိုခြင်း မပြုဘဲ မျှော်လင့်တကြီးဖြင့် ဆုတောင်း အော်ဟစ် ခဲ့ရပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူမ၏ ဆုတောင်းကို ဘုရားသခင်က နားညောင်းခဲ့ပြီး သားကို ပေးခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ထိုသားကို မိမိဝါကြွားရန်အတွက် အသုံးမပြုဘဲ နို့ပြတ်သည်နှင့် ဗိမ္မာန်တော်သို့ ပို့ကာ အမှုတော်မြတ်တွင် အသုံးတော်ခံ ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ထံမှ မျက်နှာရရှိပြီး နောက်ထပ် သားသမီးများ (၅) ယောက်ကို ထပ်မံ ရရှိခဲ့ပါသည်။
ဟန္နသည် ကျွန်တော်တို့ကို မည်ကဲ့သို့ ဆုတောင်းရမည်။ မည်ကဲ့သို့ အမှုတော်မြတ်တွင် ဆက်ကပ်ရမည်။ မျှော်လင့် တောင့်တနေသည့် ကောင်းကြီးများကို မည်သို့ခံစားနိုင်သည်ကို သင်ကြားပေးခဲ့သော မိခင်ကြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဗာသရှေဘ (ဒါဝိတ်၏ ဇနီး) (ရှောလမုန်၏ မိခင်)
ဓမ္မရာဇဝင် ၁၁း၁-၃၊ ၁၂း၂၄၊ ၃ ရာ၁း၁၁-၃၁၊ ၂း၁၃-၁၉၊ ရာဇဝင်ချုပ် ၃း၃၅၊ ဆာလံ ၅၁း၁ ကိုဖတ်ပါ။
ဗာသရှေဗသည် ရှင်ဘုရင် ဒါဝိတ်၏ အသွေးအသား တပ်မက်မှု အသုံးတော်ခံ ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ ဒါဝိတ်သည် သူမ၏ ခင်ပွန်း ဥရိယကို စစ်ပွဲတွင် သေဆုံးရန် စီမံခဲ့ပါသည်။ ဒါဝိတ်၏ လုပ်ဆောင်ကြံစည်မှုကို မနှစ်သက်သဖြင့် သူမမွေးဖွားသော သားငယ်လေးကို ဘုရားသခင် ခေါ်ယူသွားသဖြင့် အထူးကြေကွဲမှု ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ဒါဝိတ်ဘုရင်၏ မိဘုရားခေါင်းကြီး ဖြစ်လာပြီး နောက်မွေးသည့် ရှောလမုန်သည်လည်း ဘုရားသခင်၏ အချစ်တော် မင်းသားလေး ဖြစ်လာပါသည်။ နောက်တွင် ထိုသား ရှောလမုန်သည်လည်း ကြီးမြတ်သော ရှင်ဘုရင်ကြီး ဖြစ်လာလေတော့သည်။ ထိုဗာသရှေဘ သည် ယေရှုခရစ်တော် မွေးဖွားမည့် ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ဇယားတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီး ငါးဦးတွင် တစ်ဦး အပါအဝင် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
ဧလိရှဗတ် (ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်၏ မိခင်)
ရှင်လုကာ အခန်းကြီး (၁) ကိုဖတ်ပါ။
အသက်ကြီးသည်အထိ ကလေးမွေးဖွားခြင်းမရှိ မြုံနေသော အမျိုးသမီးကြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် အံ့သြဘွယ်ရာ နိမိတ် လက္ခဏာ အားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ခဲ့ရသည်။ သားယောက်ျားလေး မွေးဖွားလာခဲ့ပြီး ထိုကလေးကို ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဇာခရိနှင့် အတူတကွ သဘေတူလျက် ကောင်းကင်တမန်က ပြောဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ယောဟန် ဟူသောအမည်ကို မှည့်ခေါ်ခဲ့သည်။ သူမသည် မိမိ၏ သားကို ဟန္နကဲ့သို့ ဘုရားသခင်ထံ ဆက်ကပ် အပ်နှံပြီး အမှုတော်အတွက် အသုံးတော် ခံစေခဲ့သည်။ ထိုသားသည် ဘုရားသခင်၏ ကြီးမြတ်သော အစေခံ တမန်ကြီး ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန် ဖြစ်လာခဲ့လေသည်။ သခင် ယေရှုခရစ်၏ မယ်တော် မာရိသည် သူမထံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သောအခါ ထိုယောဟန် သည် အမိဝမ်းထဲမှာပင် ထခုန် မြူးတူးပြီး ဝမ်းမြောက်ခဲ့သောသူ ဖြစ်ပါသည်။
မာရိ (ယေရှုခရစ်တော်၏ မယ်တော်)
ရှင်မဿဲ အခန်းကြီး (၁) (၂) ရှင်လုကာ အခန်းကြီး (၂)၊ တမန်တော် ၁း၁၄ ကိုဖတ်ပါ။
မယ်တော် မာရိသည် သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် လေးစားစရာ အကောင်းဆုံး မိခင်ကြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဤကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှ လူများကို အပြစ်မှ ကယ်တင်သောခဲ့သော သူ၏ မိခင်ကြီး တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမသည် ငယ်ရွယ် နုနယ်စဉ် အခါတွင် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် အကြံအစည်တော်ကို နှိမ့်ချခြင်း ပေးဆပ်ခြင်းတို့ဖြင့် နားလည် လက်ခံခဲ့သည်။ ထိုအကြံအစည်တော်အရ သူမသည် လူများ၏ တံတွေးခွက်တွင် ပက်လက် မျှောနိုင်သော အခြေအနေ ဖြစ်သော်လည်း လက်ခံခဲ့သည်။ သူမသည် အရှက်တရား၊ အကြောက်တရားတို့ကို မျက်ကွယ်ပြုခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်တော် ဖြစ်သော် သားဖြစ်သူ (ယေရှု) နှင့် ပတ်သတ်ပြီး မည်သည့်အခါမျှ သံသယ မရှိခဲ့။ ဘုရားသခင်၏ လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်သည်ကို သေချာစွာ လက်ခံသဘောပေါက် ခံယူခဲ့သည်။ မာရိသည် ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာသာ ပေးမှုကို အကြီးအကျယ် ခံယူ ရရှိခဲ့သည်။
သူမသည် အဖ ခမည်းတော် ဘုရား၏ အမိန့်တော်နှင့် အလိုတော်ကို နာခံမှုအရာတွင် ကျွန်တော်တို့အတွက် ပုံသက်သေ ယူစရာ သွန်သင်မှု ပေးလျက် ရှိပါသည်။
မိခင်များနေ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်း
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: မိခင္.	Leaveacomment
ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို ပြောကြတာချင်း မတူကြဘူး။ ပြာသိုလပြည့်နေ့မှာ အမေများနေ့အဖြင့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အမေများနေ့ အကြောင်းကို သိသူများ ပြောပြပေးကြပါ။ တစ်ချို့နိုင်ငံရဲ့ အမေများနေ့ အကြောင်းကို အင်တာနက်မှာ ရှာပြီး ဘာသာပြန် မျှဝေ လိုက်ပါတယ်။
သမိုင်းပညာရှင်များရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ မိခင်များနေ့ကို ရှေးဂရိလူမျိုးတွေ Rhea နတ်သမီးကို ပူဇော်ပသရာက စခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရောမခေတ် မှာလည်း မိခင်များနေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲပုံစံ ကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီပွဲက မယ်တော် Magna Mater နတ်ကို ပူဇော်ပသ တာပဲဖြစ်တယ်။ ရောမမြို့က Palatine Hill မှာ မယ်တော်Magna Materအတွက် အမှတ်တရ ဆောက်ထားတဲ့ ကျောင်းဆောင်ရှိတယ်။ ဒီလို ပူဇော်ပွဲကို ဘီစီ ၂၅၀ခုနှစ်က စခဲ့ပြီး Festival of Hilaria လို့ အမည်ခေါ် တွင်ခဲ့တယ်။ မတ်ခ်ျလမှာ ကျင်းပပြီး ၁၅ ရက်နေ့ကနေ ၁၈ ရက်နေ့အထိ ၃ရက်ကြာ ကျင်းပတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံတိုင်း မိခင်များနေ့ ကျင်းပတာချင်း မတူညီကြဘူး။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့နိုင်ငံ ဥပမာ ဒိန်းမတ်၊ ဖင်လန်၊ အီတလီ၊ တူရကီ၊ သြစတေးလျှနဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံ တို့က နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရဲ့ မေလ ဒုတိယပတ် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ မိခင်များနေ့ ကျင်းပလေ့ရှိတယ်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ Mothering Sunday ကျင်းပပုံက ယခုခေတ် မိခင်များနေ့ ကျင်းပပုံနဲ့ ပိုတူတယ်။ Mid-Lent Sunday လို့လဲ ခေါ်ကြတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်ရဲ့ အာပတ်ဖြေပွဲ နောက်ဆုံးပတ် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကျင်းပကြတယ်။ တစ်ချို့ ဆိုရိုးတွေက ဒီပွဲဟာ ရှေးရောမတွေ Cybele နတ်သမီးကို ပူဇော် တဲ့ပွဲနဲ့ ဆက်နွယ်နေပြီး မယ်တော် မာရီကို အထိမ်း အမှတ် ပြုတဲ့ ပွဲလို့ဆို ပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း Mother Churchနဲ့ နတ်သမီးနေရာကို အစားထိုးလိုက်ပြီး အဲဒီအချိန် ရောက် ရင် ယုံကြည် ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာဝင်တွေက သူတို့နှစ်ခြင်း ခံခဲ့တဲ့ နေရာကို ပြန်လာပြီး သူတို့ရဲ့ ၀ိညာဉ်ကို မိခင် သဖွယ် လမ်းပြပေးတဲ့ မယ်တော် မာရီကို ပူဇော်ကြတယ်လို့ သိရတယ်။
တစ်ဖန် ၁၇ ရာစုအင်္ဂလန်မှာ အပြင် ရောက်နေတဲ့ သားသမီးတွေက နှစ်တိုင်းရဲ့ ဒီရာသီမှာ အိမ်ပြန်ကြပြီး မိခင်နဲ့ စုဝေးကြ တယ်။ လက်ဆောင် ပစ္စည်း ဒါမှမဟုတ် mothering cake တွေကို မိခင်အတွက် လက်ဆောင် ပေးကြတယ်။ တစ်ချို့က ဒီလို ပွဲတော်မှာ ဂျုံ၊ သကြား၊ နွားနို့နဲ့ အမွေးရနံ့တွေကို ရောကျိုပြီး စားကြတယ်။ မတူတဲ့ နေရာဒေသမှာ အစားအစာ တွေကလဲ ကွဲပြားကြတယ်။ အင်္ဂလန်နဲ့ စကောတလန် ဖက်က carlings လို့ခေါ်တဲ့ စားစရာတစ်မျိုးကို မိခင်များနေ့မှာ လုပ်စားကြတဲ့ အတွက် မိခင်များနေ့ကို Carling Sunday လို့လဲ ခေါ်ကြတယ်။
အမေရိကန် အမျိုးသမီး Anna M. Jarvis (၁၈၆၄- ၁၉၄၈) ရဲ့ ထောက်ခံ ပြောဆိုမှုကြောင့် မိခင်များနေ့ကို လူသား မိခင်ရဲ့ အထိမ်း အမှတ်နေ့အဖြင့် သတ်မှတ် လိုက်ကြတယ်။ တစ်သက်လုံး အိမ်ထောင် မပြုခဲ့တဲ့ Anna က သူ့မိခင် Anna Rees Jarvis နဲ့ သက်ဆုံးတိုင်နေခဲ့တယ်။ သူ့မိခင်က ဖာသာတစ်ဦးရဲ့ သမီးဖြစ်ပြီး West Virginia ပြည်နယ် Grafton ဆိုတဲ့ မြို့လေး ရဲ့ ဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာ Sunday School အနှစ်နှစ်ဆယ် စာသင်ခဲ့တယ်။
နှစ်ဆယ် ရာစုနှစ်စမှာ အမျိုးသမီးတွေ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲ ပါဝင်ခွင့်ရပြီး နိုင်ငံရေးတွေမှာ ဆန္ဒမဲ ပေးခွင့်တွေ ရလာကြ တယ်။ ဒီလို အခွင့်အရေး ရတဲ့ နေရာမှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ Annaက နိုင်ငံရေးတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၀၅ ခုနှစ် မေလမှာ သူ့မိခင် ဆုံးတယ်။ မိခင်ဆုံးပြီး (၂)နှစ်မှာ Anna က သူ့မိခင်စာသင်ခဲ့တဲ့ ဘုရားကျောင်းမှာ (၂)နှစ်ပြည့် (မေလ ဒုတိယပတ် တနင်္ဂနွေနေ့) အထိမ်းအမှတ်နေ့အဖြင့် ကျင်းပခဲ့တယ်။ အထိမ်းအမှတ်ပွဲမှာ မိခင်ရဲ့ ချိုမြိန်မှု၊ ရိုးသားမှုနဲ့ ထာဝရတည်တံ့မှုကို မိခင် ကြိုက်တဲ့ အဖြူရောင် Dianthus caryophyllus ပန်းတွေနဲ့ အစားထိုး ခင်းကျင်းခဲ့တယ်။ အခုခေတ်မှာတော့ မိခင်များ နေ့ပန်းကို အနီရောင် Dianthus caryophyllus အဖြင့် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး အဖြူရောင်ကိုတော့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မိခင်တွေ အတွက် သုံးကြတယ်။
၁၉၀၈ ခုနှစ်မှာ ပုံစံတူ အထိမ်းအမှတ်နေ့ ထပ်ကျင်းပခဲ့ပြန်တယ်။ အဲဒီနောက် Anna ဟာ မိတ်ဆွေ တစ်ချို့နဲ့ပေါင်းပြီး letter-writing campaign အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ ခေါင်းဆောင် အကြီးအကဲ၊ ကုန်သည်၊ ပါတီဝင်တွေရဲ့ ထောက်ခံမှုကိုယူပြီး အဲဒီ အထိမ်းအမှတ်နေ့ကို တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ မိခင်များနေ့အဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုက သူ့မိခင်ကို လွမ်းဆွတ်ခြင်းကနေ ရှိသမျှ အမေအားလုံးကို လေးစားပြီး လူတွေအားလုံး ဒီလိုအချိန်အခါမှာ မိခင်အပေါ်ထားတဲ့ လေးစားမှု၊ ချစ်ခြင်းတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသဖို့နဲ့ မိသားစုအချင်းချင်း မေတ္တာတွေ ပိုမိုခိုင်မြဲစေအောင်ဖြစ်တယ်။ နောက်ရည် ရွယ်ချက်တစ်ခုက အမျိုးအမီးများအတွက် နေ့တစ်နေ့အဖြင့် သတ်မှတ်ပြီး အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင် တစ်ခုလုံး အတွက် အနစ် နာခံ ပေးဆပ်နေတဲ့ မိခင်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကို အာရုံထား၊ ဂရုပြုမိဖို့ အတွက်ဖြစ်တယ်။
Annaရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ၁၉၁၀ခုနှစ်မှာ West Virginia ပြည်နယ်က မိခင်များနေ့ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့ အဖြစ်သတ် မှတ် ကြော်ငြာလိုက်တယ်။ ၁၉၁၁ ခုနှစ် ရောက်တော့ ပြည်နယ်တိုင်းက မိခင်များနေ့ကို ကျင်းပကြတယ်။ အဲဒီနှစ်မှာပဲ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံအသီးသီးက ဥပမာ မက်ဆီကို၊ ကနေဒါ၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ တောင်အမေရိကားနဲ့ အာဖရိကတိုက်တို့ကလဲ မိခင်များနေ့ကို စတင်ကျင်းပခဲ့တယ်။ ၁၉၁၂ ခုနှစ် ၁၂ လပိုင်း ၁၂ ရက်နေ့မှာ The Mother’s Day International Association ကို စတင် ဖွဲ့စည်းပြီး မိခင်များနေ့ကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့တယ်။
၁၉၁၃ ခုနှစ် Pennsylvania ပြည်နယ်ကလည်း မိခင်များနေ့ကို အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာနေ့ အဖြစ် ကြော်ညာခဲ့တယ်။ ၁၉၁၄ ခုနှစ် မေလ ၈ ရက်နေ့ မှာ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့ရဲ့ အတည်ပြုချက်နဲ့ မေလ ဒုတိယပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ကို အမေရိကားရဲ့ မိခင်များနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။ အမေရိကန် သမ္မတ Woodrow Wilson က အတည်ပြု ချက်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးပေးခဲ့တယ်။
Yugoslavia နိုင်ငံ Serbian လူမျိုးတွေ မိခင်များနေ့ကို Materice လို့ခေါ်ကြပြီး ခရစ်စမတ် မရောက်ခင် နှစ်ပတ်အလိုမှာ ကျင်းပ ကြတယ်။ ကျင်းပပုံက မိခင်များနေ့ မနက်ခင်းမှာ ကလေးတွေက မိခင်အိပ်ခန်းထဲ ခိုးဝင်ပြီး မိခင်ကို ကြိုးနဲ့တုတ် ကြတယ်။ မိခင်နိုးလာရင် ကလေးတွေကို ခေါင်းအုံးအောက်မှာ သိမ်းထားတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးပြီး ကြိုးဖြည်ပေးဖို့ တောင်းဆိုရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အိန္ဒိယ လူမျိုးတွေက ၁၀လ လဆန်းပိုင်းမှာ Durga Puja လို့ခေါ်တဲ့ ၁၀ရက်ပွဲကို ကျင်းပကြတယ်။ ပွဲက သူတို့ဘာသာမှာ အရေး အပါဆုံး နတ်သမီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Durga Durga ကို ပူဇော်ပသကြခြင်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီနတ်သမီးက ခန္ဓာကိုယ် မြင့်မားပြီး လက် ၁၀ ချောင်းပါတယ်။ လက်တိုင်းမှာကိုင်ထားတဲ့ လက်နက် ကိရိယာတွေက မကောင်း ဆိုးဝါးတွေကို မောင်း ထုတ်ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်း ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စပိန်နဲ့ ပေါ်တူဂီတွေရဲ့ ကျင်းပပုံက ဘာသာရေးပွဲနဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ်။ ၁၂ လပိုင်း ၈ ရက်နေ့ မယ်တော်မာရီကို ပူဇော် တဲ့နေ့နဲ့အတူ သားသမီးတွေက မိခင်အပေါ်ထားတဲ့ သူတို့ရဲ့မေတ္တာကို ထုတ်ဖော်ပြသတဲ့နေ့ (မိခင်များနေ့)အဖြစ် ကျင်းပ ကြတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ မိခင်များနေ့ က မေလ နောက်ဆုံး ပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပြီး တစ်အိမ် သားလုံးရဲ့ မွေးနေ့ပွဲအဖြစ် ကျင်းပကြတယ်။ ညစာစားပွဲကို မိသားစုအားလုံး တူညီ တက်ရောက်ကြပြီး စားပွဲပြီးရင် မိခင် အတွက် လုပ်ထားတဲ့ မွေးနေ့ ကိတ်ကို စားကြပြန်တယ်။
ဆွီဒင်နိုင်ငံလည်း မေလ နောက်ဆုံးပတ် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ မိခင်များနေ့ကို ကျင်းပကြပြီး ဆွီဒင် ကြက်ခြေနီအသင်းက မိခင် အတွက် ရည်စူးထားတဲ့ ပလပ်စတစ်ပန်း တွေကို ရန်ပုံငွေအဖြင့် ရောင်းချကြတယ်။ ဂျပန်နဲ့ မြောက်အမေရိကားတိုက် နိုင်ငံ များက အမေများနေ့ကို တစ်နေ့ထဲ ကျင်းပကြတယ်။ ၄နှစ်တစ်ခါ ဒီလိုနေ့ရက်မှာ အသက် ၆နှစ်မှ ၁၄နှစ် အရွယ်ထိ “ကျွန်တော့် မိခင်” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပန်းချီပြပွဲကို ကမ္ဘာ့အနှံ့ လှည့်လည်ကျင်းပကြတယ်။
မိခင်များနေ့ကို ယနေ့တိုင် ပြုလုပ် ကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ အရင်က မိခင်တွေကို သတိရ အောင့်မေ့တဲ့နေ့အဖြင့် ကျင်းပ ခဲ့ရာ ကနေ လူအဖွဲ့ အစည်း အတွက် စတေးခံ၊ အနစ်နာခံ ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးအမီးတွေ အတွက်ပါ ကျင်းပလာကြတယ်။ အမျိုးသမီး တွေ အရာရာမှာ ရင်ဘောင်တန်း လာနိုင်သလို မိခင်တစ်ဦးကလည်း မိသားစုဆိုတဲ့ နယ်ပယ်ထဲမှာ တင်မကပဲ အဖက် ဖက်မှာ အရေးပါကြောင်းကို ပြသခြင်းလဲဖြစ်တယ်။ Annaက ဥပမာကောင်း တစ်ခုဖြစ်တယ်။ သူဟာ တစ်သက်လုံး အိမ်ထောင်မပြုခဲ့၊ မိခင်မလုပ်ဖူးခဲ့ဘဲ မိခင်၊ အိမ်ထောင်ရှင်မ၊ ဇနီးမယားဆိုတဲ့ သရုပ်ကို မဆောင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပေမဲ့ မိခင်ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာတရားကို လူတွေသိအောင်၊ နားလည်အောင် ပြသနိုင်ခဲ့တယ်။
https://sites.google.com/site/theravadatemple/hot-news-1/%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%99%E1%80%94%E1%82%94%E1%80%98%E1%80%9A%E1%80%9C%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%9C%E1%80%90%E1%80%9C မှ ကူးယူ ဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by ဦးမင်းလွင် on 02/05/2013
လောကတွင် ရှိသော သက်ရှိသက်မဲ့ အားလုံးတွင် အမည်နာမများ ရှိကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်လည်း အမည်နာမများ ရှိနေပါသည်။ သို့သော် ယုံသြည်သူများကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် ထိုအမည်နာမများကို ကျွမ်းဝင်ရင်းနှီးမှုများ မရှိသလို စိတ်ဝင်စားမှုလည်း မရှိကြပေ။ ကျွန်တော်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာ မှ လူအချို့၏ အသက်ရှင်မှုကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြသဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ သားသမီးများကို အမည်နာမမှည့်ခေါ်သောအခါ ဒံယေလ၊ ရှမွေလ၊ ယောသက်၊ ဧသတာ၊ ရာခေလ စသည်ဖြင့် အမည်ပေးတတ်ကြသည်။ သို့သော် ထိုအမည်တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကိုမူ သေချာစွာ မသိရှိကြပေ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် ယုံကြည်သူ ဖြစ်သောကြောင့် အမည်များ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို သိရှိထားသင့်ပေသည်။
ယခု စာမျက်နှာတွင် သမ္မာကျမ်းစာမှ အမည်များ စာအုပ်သည် ယခင်က အလွန်လူကြိုက်များပြီး ထင်ရှားသော စာအုပ်လေး ဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ ရှာဖွေ၍ မရနိုင်လောက်အောင် ရှားပါးသွားခဲ့ပါပြီ။ လိုချင်သူ၊ မေးမြန်းသူ များပြားသဖြင့် မြန်မာပြည်၏ ပြင်ပတစ်နေရာတွင် ရောက်နေကြသော ယုံကြည်သူများနှင့် ဓမ္မဆရာများအတွက် အထောက်အကူရစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။
ယခု ဆရာ စောစံအောင် ရေးသားဘာသာပြန်ထားသော သမ္မာကျမ်းစာမှ အမည်များစာအုပ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ဒေါင်းလုပ်ယူ၍ သိမ်းဆည်း လေ့လာနိုင်ပါပြီ။
အောက်ပါ စာအုပ်ပုံပေါ်တွင် Click လိုက်ပါ။
အထက်ပါ လင့်တွင် အဆင်မပြေသူများ အောက်ပါ လင့်များတွင် ဆက်လက်ကြိုးစားကြည့်ပါ။
တွင် လည်းကောင်း ကြိုးစားကြည့်ပါ။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် လေ့လာလိုပါက အောက်ပါ လင့်တွင် သွားရောက်လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။